Banaan bax lagu taageerayo hadalkii Madaxweyne Farmaajo oo ka socda Muqdisho - Jowhar Somali news Leader
Home News Banaan bax lagu taageerayo hadalkii Madaxweyne Farmaajo oo ka socda Muqdisho
Banaan bax lagu taageerayo hadalkii Madaxweyne Farmaajo oo ka socda Muqdisho
Banaan bax lagu taageerayo hadalkii Madaxweyne Farmaajo ka jeediyay munaasabadii furitaanka Kalfadhiga 7aad ee Baarlamaanka ee ahaa in Gobolka Banaadir helo mataalada Aqalka Sare ayaa ka socda qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho.
Inta badan waddooyinka Muqdisho ayaa loo xiray banaan baxyada, si dadweynaha loogu sahlo inay isugu soo baxaan goobo loo cayimay oo ah inay isugu yimaadaan, iyadoo amnigooda la sugayo.
Banaan baxan oo uu soo qaban qaabiyay Maamulka Gobolka Banaadir ayaa tan iyo shalay la qaban qaabinayay, iyadoo uu haatan ka socdo illaa saddex goobood oo kala ah Isgoyska Sanca, Daljirka Dahsoon iyo Isgoyska KM4.
Mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Gobolka Banaadir ayaa horboodaya banaan baxyada, iyadoo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho uu dadka isugu soo baxay Isgoyska KM4 kula hadlay.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa soo dhoweeyay hadalkii Madaxweyne Farmaajo, isagoo ka hadlay muhiimadda ay leedahay in Gobolka Banaadir ay hesho mataaladeeda Aqalka Sare.
Dadweynaha dibad baxaya ayaa wata boorar ku qoran halku dhigyo taageero ah oo loo muujinayo Madaxweyne Farmaajo, sidoo kale sawiradiisa ayay wataan, waxaa u badan dadka la soo bixiyay Haween iyo dhalinyaro.
Banaanbaxyada ka dhaca Muqdisho ayaa ah kuwo inta badan abaabulan oo dadka la isugu soo bixiyo, oo hadba taageero loogu muujinayo Madaxda talada heysa, waana dhif iyo naadir banaan baxyada dadka iskood u soo baxa, marka laga reebo banaan baxyadii rabshadaha watay oo bishii April ee sanadkan 2020 ka dhacay Muqdisho ee ka dhashay dilkii askari ka tirsan Ciidanka Booliska u geystay wiil iyo gabr, xilligii Bandowga ka dhaqan galayay magaalada Muqdisho.